Midowga Yurub Oo Geeska Afrika Ku Caawinaya € 3 Bilyan, Saamiga Looga Qorsheeyay Somaliya, Somaliland & Ajandayaasha 2014 Ilaa 2020-ka | Somaliland Today
← Hargeysa: Wasiirka Ciyaaraha Oo Furay Tartan Lagu Kala Saarayo Kooxaha Heerka 2-aad Iyo 3-aad
Xukuumadda Dalka Turkiga Oo Cadaysay Mawqifkeeda Ku Aadan Dalka Suuriya. →
Midowga Yurub Oo Geeska Afrika Ku Caawinaya € 3 Bilyan, Saamiga Looga Qorsheeyay Somaliya, Somaliland & Ajandayaasha 2014 Ilaa 2020-ka
(SLT-Hargeysa) – Midowga Yurub ayaa shalay xaqiijiyay inuu taageero u fidinayo guud ahaan Gobolka Geeska Afrika, iyada oo lagu caawinayo €3 Bilyan oo lacagta Euroga ah ilaa 2020ka.
Dhawaaqa taageeradu wuxuu yimid ka hor intii aanay booqasho gobolka ku tagin Agaasime Ku-xigeenka Komishanka Yurub ee Agaasimka Hawlaha Horumarinta iyo Iskaashiga, Marcus Cornaro iyo Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Yurub ee Geeska Afrika, Alexander Rondos.
Waxay ka qayb-galayaan hawlgal wadaag ah oo heer caalami ah oo ay ka mid yihiin Hay’adaha Caalimiga ah oo ay ku jiaan Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-moon, Madaxwaynaha Kooxda Baanka Aduunka, Jim Yong Kim, Madaxwaynaha Bangiga Horumarinta Islaamka, Axmed Maxamed Cali Al-Madani iyo Gudoomiye ku xigeenka Komishanka Midowga Afrika, Erastus Mwencha.
Hoggaamiyayaasha horumarku waxay safar ku tagi doonaan dalalka Itoobiya, Jabuuti, Kenya iyo Soomaaliya halkaas oo ay kula kulmi doonaan Madaxwaynayaasha dalwaddahaasi iyo wasiiradooda iyo xubno ka socda Ururada Bulshada si ay uga doodaan caqabadaha iyo iskaashiga mustaqbalka ee gobolka Geeska Afrika.
Safarka ka hor Komishineerka Midowga Yurub ee Horumarinta, Andris Piebalgs wuxuu yidhi: “Midowga Yurub wuxuu diyaar u yahay inuu sii xoojiyo xidhiidhka qotoda dheer ee uu la leeyahay Geeska Afrika, Wuxuu caawinayaa dhisitaanka nidaam siyaasadeed oo dhamaystiran isla markaana la iskula xisaabtamo, wuxuu sare u qaadayaa iskaashiga ganacsiga iyo dhaqaalaha, wuxuu maalgalinyaa hawlaha nabad ilaalinta iyo bixinta mucaawinoyinka bilow-aadantinimo iyo iskaashiga horumarinta. Taageeradaanu ku caawinayaa guud ahaan Geeska Afrika si ay u gaadho, nabad, xasilooni, adkaysi iyo koboc uu gobolku aad ugu baahanyahay.”
Midowga Yurub wuxuu ka taageera dalalka Geeska Afrika arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. Xidhiidhkani waxa lagu sheegay Istaraatijiyadda wada shaqayn ee Geeska Afrika iyo Midowga Yurub ee sanadkii 2011 taas oo ka hadlaysa:
Wada xaajood ballaadhan oo ku saabsan siyaasadda
Iskaashiga Ganacsiga, Dhaqaalaha iyo Is dhexgalka gobolka
Ka jawaabista xasaraddaha, iyo maamulkooda oo ay ku jiraan maalgalinta hawlaha nabad ilaalinta iyo dadaaladda.
Habka Isku dhafan ee Midowga Yurub wuxuu daboolaa tusaale ahaan taageeradda isku xidhnaanshaha dalalka ku yaala Geeska Afrika sida (Isku-socodka iyo Tamarta); taageeradda nidaamka dawlad dhisidda Soomaaliya iyo Ciidamada Nabad Ilaalinta Afrika ee AMISOM, sidoo kale tababarka ciidamada Soomaalida, la dagaalanka Budhcad Badeedka ee Galbeedka Badwaynta Hindiya iyadoo ay waddo Ciidanka Badda ee Midowga Yurub (EU NAVFOR – Atalanta).
€3 Bilyan ee Euro ee lagu taageerayo iskaashiga horumarka dalalka Geeska Afrika ayaa wuxuu ka imanayaa Sanduuqa Horumarinta Yurub ee 11aad (EDF) Xadiga ugu badan ee lacagtani ayaa waxaa la marin doonaa xidhiidh laba-geesood ah oo lala yeelanayo Itoobiya, Eriteriya, Yugaandha, Soomaaliya, Jabuuti, iyo Kenya; badhkeed waxa isticmaali doona Hay’adaha Gobolka.
Barnaamijyada Midowga Yurub waxay xooga saarayaan sidii loo xalin lahaa caqabadaha hor taagaan horumarka si loo daah-faydo khayraadka gobolka. Midowga Yurub wuxuu taageeryaa dhismaha nidaam siyaasadeed oo dhisme adag leh oo la iskula xisaabtamo, waxuu ka shaqaynayaa inuu xaliyo khilaafaadka, wuxuu sarre u qaadayaa awoodda gobolka ee la dagaalanka abaarta iyo gaajada, iyo sidoo kale sarre u qaadista dhaqaalaha, kaas oo hoos u dhigaya fakhriga.
Taageerada laba-geesoodka ah ee Sanduuqa Midowga Yurub ee 2014-2020 ee dalalka la booqanayo inta uu socdo safarku waxay gaadhaysaa